आजदेखि मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु, के हो भूमे ?
नेपालको सन्दर्भमा संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदाय आदिवासी जनजाति समुदाय हो । त्यसमध्ये पनि नेपालको सरकारी तथ्यांककै आधारमा भन्ने हो भने पनि आदिवासी जनजाति समुदायकै सबैभन्दा बढी जनसंख्यामा मगर जातिको पहिलो स्थानमा रहेको छ । वि.सं. २०५८ को तथ्यांकमा १६ लाखभन्दा बढी मगर जातिको जनसंख्या रहेको छ । यद्यपि मगर जातिको साझा संगठन नेपाल मगर संघ लगायतका मगरसम्वद्ध संघसंस्थाहरुले भने यो तथ्यांक ठिक नभएको भन्दै २० लाख बढी मगर समुदायको जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि नेपालको आदिवासी जनजातिमा मगर जातिको सबैभन्दा ठुलो स्थान रहेको पाइन्छ । संख्यात्मक हिसाबले समेत ठूलो रहेको यस जातिभित्र एक जाति बहुल संस्कृति र बहुभाषिकताको अस्तित्व रहेको छ ।
भाषा, संस्कृति, परम्पराले धनी मगर जातिले शासनसत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा दुई मगर भाषा ‘अथार’ र ‘बाह्र’बाट एकै अर्थ ‘पानी’ भन्ने बुझाउने नाम रहेको रिडीबाट रहन गएको रिडी नदी भन्दा पश्चिमतर्फ अथार मगरात र सोभन्दा पूर्व बाह्र मगरातको बहुभाषिक र बहुल संस्कृति भएको सभ्यताको विकास भएको पाइन्छ । सो क्षेत्रहरुमा बसोवास गर्ने मगर जातिको आ–आफ्नै मौलिक संस्कृतिले युक्त पश्चिममा अथार र पूर्वमा बाह्रवटा मगर राज्यहरु पनि सञ्चालन भएको पाइन्छ ।
मगर समुदायभित्र बहुल भाषा, संस्कृति, परम्परा र चाडपर्वहरु रहेका छन् । विविध संस्कृति र चाडपर्वहरुको कुरा गर्दा अथार मगरात क्षेत्र पश्चिमका मगरहरुले मनाउने संस्कृतिले भरिपूर्ण प्रमुख चाडको रुपमा भूम्या नोगोबाङ्गे पर्वको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । मगर जाति आदिवासी जनजाति समुदायमै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा मात्र नभएर यसभित्र ‘एक जाति, बहुल संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा र भाषा’ भएको जाति हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो ।
मगर जातिले अहिलेसम्म पनि आफ्नो जातिको अस्तित्व र पहिचानको रुपमा भाषा, संस्कृति रीतिरिवाज, परम्परा, भेषभूषा र चाडपर्वलाई जोगाइराखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा अथार मगरात क्षेत्रका मगर जातिले लामो समयदेखि मगर जातिको पहिचानको रुपमा रहेको भाषा, संस्कृति, परम्परालाई जोगाइराखेका छन् । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका मगर जातिले आफू जुन ठाउँमा बसाइँ सरेर गए पनि आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ ।
के हो भूम्या नोगोबाङ्गे ?
खासगरी विशेष गरेर उत्तरी क्षेत्रको पहाडी इलाकामा बसोबास गर्ने मगर समुदायले यो पर्व मनाउने गर्दछन् । मगर समुदायको बसोबास प्रायः पहाडी क्षेत्रमा हुने र भौगोलिक विकटताका कारण पनि पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्ति बढी हुने हुनाले भूमिका पुजारी मगर समुदायले त्यसको रोकथामका लागि भूम्या पर्व मनाउन सुरु गरेको यस क्षेत्रका अग्रजहरुको भनाइ रहेको छ ।
कसरी मनाइन्छ भूम्या अर्थात भूमे ?
भूमे पर्व खासगरी भूमि देवतालाई पूजा गर्नु हो । यसको पूजा गरेपछि प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोपबाट बच्न सकिने मान्यता रहेको छ । यस पर्व अथार मगरात क्षेत्रमा मगर समुदायले निकै लामो समयदेखि मनाउँदै आएका छन् । विशेष गरेर साविक राप्ती अञ्चलको रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यान, दाङ तथा धौलागिरी अञ्चलको बाग्लुङ, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा यस पर्वलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ । असार एक गते मनाइने भूम्या पर्वको तयारी एक महिना अगाडिदेखि नै गर्ने चलन रहेको छ । भूमे मनाउने विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरु रहेका छन् । कसरी मनाइन्छ त भूमे ? यहाँ त्यसको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
भूम्या पर्व कसरी मान्न थालियो, के छ खास कारण ?
त्यसैअनुरुप शेर्पाली कामीले घले सनासो र हाते घन तताएर सर्पको टाउको च्यापेर मार्न थालेपछि सर्पले मलाई नमार हाम्रो सर्प शाकाले हार्यो, तिमीहरुको शाकाले जित्यो, म त भूमि देवता हुँ, प्रत्येक वर्षको असार महिनाको पहिलो हप्ता सेतो कपडामा धुपधुवाँर गरी मलाई बलि दिई पूजा गर्नू । त्यसो गरेमा म शान्त हुन्छु भनेको र त्यसै समयदेखि भूम्याको शुरुवात भएको यस पर्व पुर्खाले मान्दै आएको रसबहादुर शेर्पालीले बताए । त्यसै समयमा सर्पको रुपमा रहेको भूमि देवताले नै शेर्पाली कामीबाट चोखो पानी, दूधको धार लिने र दर्लामी पुन मगरबाट बलि दिने भन्ने भनाइअनुसार अहिले पनि शेर्पाली कामीबाट धुपधुवाँर गर्ने र दर्लामी पुन मगरले मार हान्ने गरिन्छ । त्यसमध्येमा पनि मगर समुदायका एकजना जैसीद्वारा ग्रह हेरेर राहु ग्रह भएका व्यक्तिले काट्ने, केतुले तान्ने गरिन्छ । यसैका आधारमा भूम्या देवताको पूजा नगरेमा ठूलो विपत्ति आइलाग्छ । भूमे देवता रिसाएमा अनिष्ट हुन्छ भनेर निकै लामो समयदेखि अथार मगरात क्षेत्रका मगर जातिले भुम्या पर्व भव्यरुपमा मनाउँदै आएको मगर जैसी जीतबहादुर पुन मगरले जानकारी दिए ।
नोगोपोमा अग्रज बुढापाकाहरुद्वारा भूम्या पर्वको उदघाटन भइसकेपछि गाउँभरिका युवायुवती गाउँका केही अग्रज बुढापाकाहरुसहित बाजागाजा बजाउँदै २०÷२५ जनादेखि ४०÷४५ जनासम्मको समूह ३५ हजारदेखि ५ हजारसम्मको उचाइमा बुकीको फूल टिप्न जाने गरिन्छ । जेठ महिनाको मसान्तको पहिलो दिन गाउँमा भूम्याको उदघाटन गरिसकेपछि बुकी फूल टिप्न जाने समूह दिउँसो ३÷४ बजेतिर बुकीतिर जाने गरिन्छ । केही गाउँका अग्रजहरुको साथ गएको उक्त समूह बाटोभरि नाचगान गर्दै बाजागाजासहित नास्तापानी गर्दै जाने गरिन्छ । फूल टिप्न जाने युवतीहरु मगर भेषभूषा छिट्को गुन्यू, मखमलको चोलो, गादो, भाङ्ग्रो, पहेंलो पटुकी, पुराना चाँदीका गहना, पहेंलो हरियो पोते, चुरामा चिटिक्क परेका हुन्छन् भने युवाहरु मखमलको भोटो, घरमै भेडा तथा भाङ्ग्रोबाट तयार पारेको कछाड, घरमै तयार पारेको पटुकी बाँधेर छड्के खकुरी भिरेर चिटिक्कै परेका हुन्छन् । सँगसँगै केटाहरुले भेडाको ऊनबाट तयार पारिएको भोटो ओढेका हुन्छन् भने युवतीहरुले घरमा ऊनबाट तयार पारेको झोलाभरि घरमा बनाएका कोसेलीहरु बोकेर जाने गर्छन् । बुकी जाँदा लामो उकाली यात्रालाई सहज बनाउनका लागि युवायुवतीहरुले गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै जाने गरिन्छ । गाउँको उचाई स्थानमा बुकीको फूल टिप्न जाने कामलाई मगर भाषामा नोगो जाने पनि भन्ने गरिन्छ । नोगोपोमा निकै चिसो हुने र पानी समेत नपाइने हुनाले गाउँका युवतीहरुले घरबाटै पानी, अर्नी पानी, नास्ता, खानेकुरा लिएर गएका हुन्छन् । यो पर्व खासगरी मगर समुदायले मनाउने भएको हुनाले अर्निपानी स्वरुप जाँडरक्सी पनि लाने गरिन्छ । नोगोपो जाने क्रममा सँगै गएका दमाई थरका बाजा बजाउने कलाकारले उकालोभरि नै पूरै बाजा बजाएर जाने गर्छन् ।
नोगोपो जानेहरुले जाने फर्किने क्रममा ठाउँ–ठाउँमा बसेर सल्लाको हाँगा काटेर मुर्ला बनाउने, त्यसमा धजा झुण्ड्याउने, अक्षता, ढुङ्गा (सक्क क्षेत्त) फाल्ने काम गरिन्छ । त्यस ठाउँमा सबैले थकाई मार्ने, अर्निपानी खाने काम पनि गर्दछन् । फूल टिप्न जाने क्रममा धेरै ठाउँमा पन्थ्यौली बनाउँदै जाने चलन रहेको छ । त्यस ठाउँमा बाजा बजाउँदै नाचगान गर्ने चलन समेत रहेको छ । यो क्रम जाने आउने दुबै समयमा गर्ने गरिन्छ ।
असार १ गते बिहानैबाट गाउँका सबैजनाहरु भूम्या पूजाका लागि तयारी गर्ने गर्छन् । बिहानको खाना खाएर पूजाको पूरा तयारी भइसकेपछि गाउँमा निर्माण गरिएको भूम्या नाच्ने ठाउँमा गाउँलेहरु जम्मा हुन्छन् । पुजारीले पनि आफूले गर्ने करिब–करिब सम्पूर्ण विधि पूरा गरिसकेपछि गाउँको पूर्वतिरको छेउँमा सबैजना जम्मा हुन्छन् । र, पूजाका लागि तयार गरिएको मार (भेंडा, बोका, कुखुरा, सुंगुर)लाई सबैको माझमा राखेर पुजारीले धुपधुवाँर गरिसकेर मारले मानेपछि मार काट्ने, तान्ने अन्य गाउँलेहरुले मारलाई दगु राउँदै गाउँ निकाला गर्ने गरिन्छ । जसलाई भूम्या निकाल्ने पनि भनिन्छ । गाउँबाट भूम्या निकाल्दा घरमा रहेका महिलाहरुले नाङ्लो, सुपोमा धैंसो, खरानी, दशैको बेला ढोकामा लगाएको टीका, जमरा घरमा उपलब्ध भएका अन्नहरु गहुँ, जौ, धान, कोदो, तोरी आदि राखेर सबैले घरबाहिर फाल्ने गरिन्छ । यसो गरेमा वर्षभरिको ग्रहदशा विपत्ति भूम्याले लैजान्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
पूजा गर्दा के विधि अपनाइन्छ ?
के के गर्छन् पुजारीले ?
पूजा पाठ भन्नेबित्तिकै सामाजिक मूल्यमान्यता, धर्म, संस्कारका कारण दलित पनि पुजारी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि धेरैमा हुन सक्छ । तर मगर समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको साविक काँक्री गाविस– ६ लुकुम रुकुममा भूम्या पूजाको स्थापनादेखि नै शेर्पाली थरका दलितले भूम्या पर्वको पूजापाठ गर्दै आएका छन् ।
स्वभावैले पनि भूम्या पर्वको शुरुवातदेखि नै शेर्पाली कामीले साहसिक काम गरेको कारण भूम्या पूजाको पुजारी दलित भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने एक दुई ठाउँमा मात्र मगर समुदायका पुजारी भएको पाइन्छ । तर समाजमा दलित जातिलाई हेय, तल्लो जातका रुपमा हेरिने गलत मान्यतालाई भने मगर गाउँमा परापूर्वकालदेखि नै दलित पुजारी हुनुले चुनौती दिएको छ ।
खासगरी भूम्या पर्व भूमि देवतालाई मान्नका लागि अथार मगरात क्षेत्रको प्रायः सबै ठाउँमा मान्ने गरिन्छ । तर स्थान, क्षेत्रअनुसार केही रुपमा फरक–फरक पाइएको छ । रुकुम जिल्लाको महत गाविस क्याङ्सी सिमा लगायतको स्थानमा भूम्या थानमा सुंगुरको बलि दिने चलन रहेको छ । यसैगरी रुकुमकै लुकुम, कांक्री, तकसेरा, कोल लगायतका स्थानमा भेंडाको बलि दिइन्छ भने रोल्पाको थवाङ, मिरुल लगायतका ठाउँमा बोका बलि दिने गरिन्छ । यसैगरी रोल्पाकै अन्य केही ठाउँहरुमा कुखुराको बलि दिने चलन रहेको छ । यस विषयमा रुकुम कोल निवासी संगीतकार तथा फिल्म निर्माता धु्रव पुन मगरले आ–आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारण बलि दिने क्रममा फरकपन आएको बताउँछन् ।
भूम्या पर्व मनाउँदा माथि उल्लेख भए जस्तै विभिन्न विधिहरु अपनाइने गरिन्छ । तर माओवादी विद्रोहका कारण बीचमा तीन÷चार वर्ष भूम्या बन्द भएको थियो । केही समय बन्द भएको भूम्या पर्व अहिले आएर केही स्थानहरुमा परिमार्जित भएको छ । थवाङ लगायतका ठाउँहरुमा भूम्या शुरु हुनुभन्दा पहिले बुकीमा फूल टिप्न जाने, भूम्या थानमा बलि दिने लगायतको विधि गर्न बन्द भएको छ । भूम्याको पूजा गरिसकेपछि पाँच दिनसम्म बाजाको तालमा नाचिने विभिन्न २२ चाल नाच अहिले आएर १७ चालमा सीमित भएको छ । समय अनुसार पुराना थुप्रै परम्परा, संस्कृतिहरुमा परिवर्तन भएजस्तै भूम्या पर्वमा नाचिने २२ चाल नाचमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले १७ चाल नाच नाच्न थालिएको थवाङका माओवादी नेता सन्तोष बुढा मगरको भनाइ रहेको छ । भूम्या पर्व मनाउनका लागि आर्थिकरुपमा पनि खर्चिलो भएका कारण परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको रोल््पा थवाङस्थित स्थानीय क्लवका अध्यक्ष महेश बुढा मगरको भनाइ रहेको छ ।
त्यसैगरी केही वर्षयता काठमाडौंमा रहेका मगर समुदायले पनि यस पर्वलाई मनाउँदै आएका छन् । लुगुम्याल समाज, खाम मगर समाज, अथार मगरात भाषा संस्कृति प्रतिष्ठान लगायतले यस पर्वलाई काठमाडौंको खुलामञ्चमा मनाउँदै आएका छन् ।
भूम्याको बिषयमा डकुमेन्ट्री निर्माण
भूम्या पर्वलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भर्खर मात्र लुगुम्याल समाज केन्द्रीय समितिले भूम्याको विषयमा डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा मगर जातिको साँस्कृतिक संरक्षण संबद्र्वन तथा विकासमा योगदान पुराउने उद्देश्यले डकुमेन्ट्री निर्माण गरिएको संस्थाका महासचिव श्रीबहादुर पुन मगरले जानकारी दिए । मगर जातिको ऐतिहासिक राज्यसत्ता र संस्कृतिसँग ठूलो महत्व राख्ने भूम्या पर्वको डकुमेन्ट्री रुकुम रोल्पाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा छायांकन गरिएको हो । ‘मगरात क्षेत्र भाषिक साँस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै धनी भएपनि राज्यको ध्यान पुग्न नसकेका कारण यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरु दिनदिनै कमजोर तथा लोप हुँदै गएका छन्’, डकुमेन्ट्री निर्देशक नविन रोका मगरले भने, ‘यी संस्कृतिहरुको संरक्षण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यसकारण भाषा, संस्कृति जोगाउन एवं विकास गर्नका लागि यसको निर्माण गरेका हौं ।’ अथार मगरात क्षेत्र डोल्पाका सहर ताराकोटका काइके भाषा बोल्ने मगर समुदाय र बाह्र मगरात क्षेत्रका मगर समुदायलाई लक्षित गरी डकमुेण्ट्रीको निर्माण गरिएको हो ।
भाषा, संस्कृति, परम्पराका धनी मगर समुदायमध्ये अथार मगरात क्षेत्रका मगरहरुले अहिले संस्कृति संरक्षणमा चासो देखाउनु आफैमा सराहनीय कुरा हो । आफू बसेको भूमि र भूमि देवताको पूजा गर्ने संस्कृतिले मगरहरु मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आदर राख्ने भावना प्रवल रहेको पाइन्छ । साथै यो पर्व मनाउनुले दैवी विपत्तिबाट जोगिन गरिने कर्म र जोगिएको उपलक्ष्यमा गरिने उत्सवको रुपमा पनि लिने काम गर्दछ भने एकातिर मगर राज्यसत्ता सञ्चालनको बेला राज्यको विधिविधान बनाउने, वर्षभरिको लागि नियमकानून बनाउने, कानून बनाउने जनप्रतिनिधि, भद्रभलादमीको चयन गर्ने, जनताको संख्याको लगत लिने आदि गरिने विशेष दिनको कामको रुपमा लिने गरिएकोले पनि यो पर्व ऐतिहासिक महत्व बोकेको मगर जातिको मात्र नभएर आम राष्ट्रको पर्व हो । त्यस कारण यसको संरक्षण, संबद्र्वन गर्नु मगर जातिको मात्र दायित्व नभएर राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण भूमिसँग जोडिएको मगर समुदायले मान्दै आएको भूम्या पर्वको संरक्षणका लागि राज्यले विशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ । संस्कृति, परम्परा, भाषा लोप हुनु राष्ट्रिय पहिचान लोप हुनु हो । त्यसकारण यस पर्वको संरक्षण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । होइन भने भोलि इतिहासको गर्भमा भूम्या पर्व थियो रे भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति नआओस् ।
(नेपाल म्युजिक सेन्टरको अर्धवार्षिक अनुसन्धानमूलक साँस्कृतिक प्रकाशन ‘लोकसंस्कृति’को वर्ष ६, अंक १, पूर्णाङ्क ९, २०६७ साउन–पुसमा प्रकाशित)
लेखिका लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील छिन् ।